MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE NEW ZEALAND - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee New Zealand
'Tani waa Ted oo jira 6 sano. Waxaa naloo siiyay arday 8-wiig jir ah markii aan ku noolaanay beerta si aan uga shaqeyno adhiga , oo uu si aad u wanaagsan u qabtay. Had iyo jeer waan haysanay Kelpies , laakiin waxaa laga helay Huntaway waxtar badan, gaar ahaan deyrka. Waxaa uuriyay Mr. & Mrs. B. Smith oo reer Quirindi ah. Aad ayuu daacad u yahay. Ey hal nin ah, laakiin wali jecel dadka kale. Isagu waa caqli badan yahay, fudud yahay in la tababaro, wuxuu jecel yahay cayrsashada idaha iyo kubbadda, wuxuu jecel yahay inuu seexdo gudaha iyo boorsooyin badan iyo koollo. Isaga ayaa la jaray xagaa kasta. Hada waa eey magaalo sidaan uga guurnay wadanka. Wuxuu ku boodayaa kursiga keydka nasashada ee amarka. Wuxuu ka heli karaa kubad lumisay jardiinka isagoo raacaya calaamadaha gacanta. Wuxuu ubaahanyahay jimicsi fara badan si loo xajiyo Wax badan buu ciyoobaa oo aad buu u qayli karaa. Ted waa eeygii ugu fiicnaa ee aan abid leenahay aad baanna u jecel nahay! '
New Zealand Adhi
cuntada badda Zee-luh nd huhnt-uh-wey
Huntaway-ka New Zealand wuxuu ku yimaadaa qaabab, cabbirro, midabbo iyo jaakado timo. Qaar ka mid ah eeyahaani waa kuwo aad u waaweyn qaarna aad ayay u yar yihiin. Dadka jecel Huntaway ee New Zealand, muuqaalka eeygu muhiim uma aha sida awooddiisa shaqo.
Huntaway-ka Niyuusiilaanku waa eey aad u gooni ah oo idaha xanaaneeya, iyada oo codkeeda u kaxeysa adhiga. Eygu wuxuu ku tiirsan yahay inuu soo uruuriyo lo'da oo uu gadaal ka raaco. Dhacdooyin gaar ah ayaa loo sameeyay eeyahaas markay jiraan tijaabooyinka idaha. Dhacdooyinka waxaa loo yaqaan 'huntaways,' aakhirkiina eey u bixiyeen magaciisii. Caadi ahaan carruurta way ku wanaagsan yihiin oo si fudud ayey u adeecaan tareenka, Huntaway-ka New Zealand waa eey caqli badan. Waxay caadi ahaan ku fiican yihiin xayawaanka aan xayawaanka ahayn. Huntaway-ka New Zealand wuxuu saaxiib la yahay shisheeyaha. Iyagu maahan eeyo waardiye ah qaarkoodna ma ahan waardiyeyaal fiican. Sababtoo ah waxaa loo soo saaray sidii eey udaya ciyaya, waxay u baahan yihiin in la tababaro goorta ay cixayaan iyo goorta aysan ciyi karin. Eeyadan ayaa ah kuwo aad u caqli badan, sidaa darteed tan ma ahan wax adag in la sameeyo. Hal milkiile ayaa leh, Xaqiiqdii waxay ciyi karaan markii la shaqaynayo. Waxaa loo tababaray inay aamusaan oo codkooda u keydiyaan inay shaqeeyaan. Marka astaantan waa lagu tababaran karaa iyaga. Ninkaygu xitaa wuxuu la yimid amarro gooni ah si uu eygiisa ugu diro dibad baxyo leh cod ama cod la'aan. Kaliya ma ahan kuwa caqli badan ee waa kuwo caqli badan. New Zealand Huntaways waxay u baahan tahay an milkiil degen, kalsooni leh oo iswaafaqsan , samaynta ah xeerarka cad iyo iyaga ku dheggan . Eygan waa inaan loo oggolaan inuu kugu qayliyo markuu wax rabo, maxaa yeelay tani waxay u oggolaanaysaa eyga inuu ku lug yeesho a dabeecadaha ugu badan .
Dhererka: 20 - 24 inji (51 - 61 cm)
Miisaanka: 40 - 65 rodol (18 - 29.5 kg)
Tani waa kaladuwanaansho cabbir aad u guud ah Huntaway-ka New Zealand wuxuu ku yimaadaa qaabab iyo cabbirro kala duwan.
Huntaway-ka New Zealand wuxuu u egyahay inuu yahay mid caafimaad qaba.
Huntaway-ka New Zealand wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Eygan ayaa ku noolaan kara kuna seexan kara bannaanka illaa inta uu haysto hoy ku habboon.
Tani waa eey aad u firfircoon, oo markii hore loogu talo galay inuu noqdo eey shaqeeya sidaa darteed wuxuu u baahan yahay jimicsi fara badan. Waxay u baahan tahay in lagu qaado a maalin kasta, dheer, socod kacsan ama orod meesha eygu ku ag yaal ama ka dambeeyo qofka haya hogaanka. Marnaba hore, sida dareenku u sheego hoggaamiyaha xirmada eeyga ayaa ugu horreeya. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka faa'iideysan doonaan meel si bilaash ah looga dhex wado aag ammaan ah.
jack russell xadka terrier mix
Shanlo oo si joogto ah ugu caday burush adag oo caday. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Eeyahaani waa celcelis daadiyayaal.
Huntaway-ka New Zealand wuxuu ka yimid 1900-naadkii. Inkasta oo inta badan eeyaha idaha Ingiriiska ee asalka ah loo daabulay New Zealand ay adhiga u shaqeeyaan si aamusnaan ah, eey marmar ah ayaa codkiisa ku shaqeyn jiray. Qaar ka mid ah adhijirrada ayaa la yaabay arrintan, iyaga oo jecel waxa ay ku arkeen eeyaha adhiga ee codka wata. Taranka xulashada ah ee eyda xoolahooda dhaqanaya iyo noocyo kale oo badan ayaa loo tallaabay si loo helo astaamaha la rabay. Shaybaarka Madow, Hound, Colorder Border, German Shepherd Dog waa wax yar. Noocyo badan oo badan ayaa lagu soo daray hiddo-wadaha eydaas. Nidaamkan taranka ayaa lagu guuleystay, taasoo keentay Huntaway New Zealand, oo ah nooc ku dhiirrigeliya idaha adoo adeegsanaya codkiisa. Huntaway-ka New Zealand wuxuu ku dhashaa run ujeedkii loogu talagalay ee ah adhiga. Waxaa loo dhoofiyey Great Britain, halkaas oo ay kaqaybqaadato tijaabooyinka goobta waxayna ushaqeeysaa sida ido. Waxay noqoneysaa mid caan ah sida eey wehel ah. Xilligan waxaa jira NZ Huntaway Club oo ka bilaabanaya Japan.
NZSDTA = Ururka Tipdog Trial Association
Regardo waa Huntaway garka leh oo ka shaqeeya beero caano.
'Jayda waa eey Huntaway ah oo halkaan lagu muujiyey iyadoo afar jir ah. Iyadu waa eey ka shaqeeya beerta caanaha laga sameeyo. Wicitaanadeedu waa: 'Jidka dib u noqo,' 'kor u soco,' 'gadaal,' 'kor u hadal,' 'baaskiil,' 'joog', 'orod' iyo 'dabagal.' Waxaa gacan looga soo qaaday cunug yar, maadaama hooyadeed ay dishay dhamaan ciyaalkeedii laakiin Jayda. '
Lamaane qaangaadh ah oo reer New Zealand ah
Lucy, waa 9 jir New Zealand Huntaway ku nool Japan
Lucy waa 9 jir New Zealand Huntaway ku nool Japan
Eeyooyinka Huntaway ee New Zealand - kani waa Jimmy (xagga dambe) iyo walaashiis Jade (xagga hore) waxay jiraan qiyaastii 6 bilood. Waxaa laga soo korsaday beer markii ay ahaayeen 7 toddobaad waxayna hadda la deggan yihiin magaalada dadkii lahaa.
sida loo aqoonsado coydog
toy dawaco Pit isku darka poodle
Intee ayey le'egtahay westies-yada
Eydii feeryahan 3 toddobaad jir